ကွယ်လွန် သွားတဲ့ မိခင် အတွက် နောက်ဆုံးစာလေး တစ်စောင် ရေးသား လိုက်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကွယ်လွန် သွားတဲ့ မိခင် အတွက် နောက်ဆုံးစာလေး တစ်စောင် ရေးသား လိုက်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်
ကွယ်လွန် သွားတဲ့ မိခင် အတွက် နောက်ဆုံးစာလေး တစ်စောင် ရေးသား လိုက်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်
အနုပညာလောက မှာ ဝါရင့်အဆိုတော် တစ်ဦးအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်လာတဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်ကို မသိတဲ့သူ မရှိသ လော က်ပါပဲ။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဆိုတော် တင်ဇာမော် ရဲ့ မိခင်ဟာ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၅၀ မိနစ်မှာတော့ ဘဝ တစ်ပါးကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူကို ပြုစု စောင့်ရှောက်ရင်း အဆိုတော် တင်ဇာမော် ကိုယ်တိုင် ကလည်း ကိုဗစ်ရောဂါကို စတင်ပြီး ခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
အဆိုတော် တင်ဇာမော် ဟာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင် အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပြီး စာလေး တစ်စောင် ရေးတင်ထားပါတယ်။ “မေမေရေ… ဒီဘဝ ခဏ အခိုက်အတန့်လေးမှာ ဒီခန္ဓာကို အသုံးပြုပြီး အကောင်းဆုံးတွေ မေမေကြိုးစားလုပ်ဆောင်‌လို့ အဖက်ဖက်က တာဝန်‌တွေကြေခဲ့ပြီ မို့ မေမေ နောက်ဆံမတင်းပဲ သံသရာခရီးကို ဖြောင့်ဖြောင့် ဆက်ထွက်ပါနော်…. သမီး မေမေ့ကို တရားနဲ့ ယှဉ်ပြီးချစ်တယ်နော်…. သမီးအချစ်နဲ့ မေမေ့ကို မပူလောင်စေရဘူးနော်… အချိန်ရောက်ရင် အားလုံးသွားမယ့် ခရီးကိုမေမေသွားရမှာမို့ ပြုခဲ့သမျှ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကောင်းမှူကုသိုလ်တွေ အားလုံးကို အာရုံပြုထားနော်..
ဗိမ္မာန်လည်း မေမေ့အတွက်ပေါက်ပြီးသားနော်…”လို့ … မေမေကို အနားမှာကပ်ပြီး တောက်လျှောက်ပြောပေးနိုင်ခဲ့လို့ မေမေ ကောင်းရာ ဘုံဘဝကိုကူးပြောင်း သွား ပြီ လို့ သမီးယုံကြည်တယ်မေမေ။ မေမေ အခါခါ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ဆန္ဒတွေအတိုင်းလည်း မေမေ့ရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာ ကို သမီးကိုယ်တိုင်နှုတ်ဆက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါပြီ မေမေ။” လို့ သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ရေးသား ထားခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း စာဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ အပြင် မိခင်ဖြစ်သူ ကောင်းရာဘုံဘဝ ရောက်ဖို့ ဆန္ဒပြုခဲ့ ကြပါတယ်။
Shwe Yaung Myanmar ( Writer – WPO )
Previous post အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပေါင်သား ပေါ်လွင်အောင် ပြသ လိုက် တဲ့ ယွန်းမီမီကျော်
Next post ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး အောက်စီဂျင်ရှုနေရတဲ့ အပြင် အရေးပေါ် ဆေးဝါး လိုအပ်နေတဲ့ မင်းသားပိုင်တံခွန် ရဲ့ မိခင်ကြီး